Qaadkii la geyn jiray Soomaaliya oo maanta la joojinayo (Maxaa soo kordhay?) – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Qaadkii faraha badnaa ee la geyn jiray Soomaaliya ayaa maanta la joojinayaa, sida ay BBC u sheegtay Suweys Jaamac Maxamed oo ka mid ah dumarka ka ganacsada qaadka, ee Kenya uga daabula Soomaaliya.
Suweys ayaa sheegtay in sababta loo joojiyey qaadkii Soomaaliya loo qaadi jiray ay tahay iyadoo qaadku aad qaali uga noqday Kenya, islamarkaana dowladda Soomaaliya ay canshuur adag saartay qaadka laga dejiyo Mudisho iyo deegaanada Puntland.
“Annaga ayaa go’aan ku gaarnay inaan qaadka iska joojino, maanta, berri iyo maalinta xigtaba qaad ma tegayo Soomaaliya, maxaa yeelay qaadka ayaa noogula qaaliyey gudaha Kenya, dowladda Federaalka iyo Puntland canshuur badan ayay kusoo rogeen” ayay tiri Suweys Jaamac.
Waxey sheegtay in la xaajoojn doonaan qolooynka iska leh beeraha qaadka Kenya iyo dowladda Soomaaliya si labada dhinacba wax uga dhimaan qiimaha qaadka iyo canshuurta.
“Jawaanka qaadka ah wuxuu Miiruu ka joogaa 50 kun ilaa 55 kun oo Shilinka Kenya ah 00 u dhiganta ($600) dollar, sidaasna qaad kuma geyn karno Soomaaliya, marka waxaan diyaarinay guddi la xaajooda Miiruu iyo dowladda Soomaaliya” ayay sidoo kale tiri Suweys.
“Marka qaadka la geeyo Muqdisho iyo Puntland waxaa jawaanki lagu canshuuraa $200 dollar, taasinha culeys ayay nagu tahay” ayay sidoo kale tiri.
Ugu dambeyn waxey sheegtay Suweys in maalin kasta ay Muqdisho tegi jireen 16 siyaaradood oo yaryar oo qaad sida, halka Puntland ay maalin kasta tegi jirtay diyaarad oo dhuganta 6 diyaaradood oo yaryar, dhamaana aysan manta tegi doonin Soomaaliya.